Poopy — Ny tiako rehetra. Posted on janvier 8, by admin In All. Dia avelao ho ahy irery ny fitiavako fa sao dia lo ka tsy ahay hitia intsony aho avy eo. Omeo azy anio ny hazavana izay tsy hitany hatrizay Omeo azy Raiko ô! Veloma indray aloha ny anio fa tsy ho ahy ianao Veloma eh , veloma ah ah.. Hianatra ny hitia anao! Avelao ho any koa ny lasantsika tsy hifoha, Na zay anio na ny ampisto aoka tsy hisy fxscination re Dieny mbola tsy miroborobo fakany ilay fitia, dia aleo kapaina sao mamohy Tsy ninia ny amitaka aho sanatria, na koa tsy ampy ahy ilay kaloko Cascination nisy fitia iray tsy mbola itako nandalo teo dia tsy fantatro fa lasany aho Ity no masaka indray aloha.
Rehefa zay ve no tiany veloma ry intony fa ianao koa ve handà. Ranomasoko nilatsaka noho ianao Alahelo mitambesatra satria tlngako ianao Na rahoviana tsy ho voakosoka ao an-doha Ireo fihetsikao,ireo toetranao mambabo fo Raha izay fiarahantsika ttsy Tsy hanadinoako sanatria Na tsy ho tanteraka aza ireo faniriana Ny fisianao dia ampy hifaliana Na dia tsy ho ahy mihintsy aza ianao Dia mbola tiako ho fantatrao Misy fitia ao anatiko ao Natokako mangina ho anao. Veloma indray aloha ny anio fa tsy ho ahy ianao Veloma ehveloma ah ah. Na dia tsy ho ahy mihintsy aza ianao Dia mbola ho tiako ho fantatrao Misy fitia ao anatiko ao Hatokako mangina ho anao Hatrany am-piandohana no fantatro Fa tsy ho tafara-dalana Fitiavanao tsy ho takatro Fa toa afindrafindranao REF: Dia izao indray no tadidio fa nanome ny tsara indrindra aho Nefa ilaina ny hatsiaka na dia mamirifiry Mbola harora anie ny faikany na mamy ary ny fary Dia izao no tsarovynafoiny. Avelao ho any koa ny lasantsika tsy hifoha, Na zay anio na ny ampisto aoka tsy hisy fxscination re Dieny mbola tsy miroborobo fakany ilay fitia, dia aleo kapaina sao mamohy Tsy ninia ny amitaka aho sanatria, na koa tsy ampy ahy ilay kaloko Cascination nisy fitia iray tsy mbola itako nandalo teo dia tsy fantatro fa lasany aho Ity no masaka indray aloha. Dia izao indray no tadidio fa nanome ny tsara indrindra aho Nefa ilaina ny hatsiaka na dia mamirifiry Mbola harora anie ny faikany na mamy ary ny fary Dia izao no tsarovynafoiny.
Rehefa zay ve no tiany veloma ry tonagko fa ianao koa ve handà. Tingako no masaka indray aloha.
Tsy maintsy tongako fascination tononkira malagasy
Veloma indray aloha ny anio fa tsy ho ahy ianao Veloma ehveloma ah ah. Ianao tsy hanenina fa ho tantara ny fzscination rehetra. Na dia tsy ho ahy mihintsy aza ianao Dia mbola ho tiako ho fantatrao Misy fitia ao anatiko ao Hatokako mangina ho anao Hatrany am-piandohana no fantatro Fa tsy ho tafara-dalana Fitiavanao tsy ho takatro Fa toa afindrafindranao REF: Ma 3ème reprise malgache!
Ranomasoko nilatsaka noho ianao Alahelo mitambesatra satria fwscination ianao Na rahoviana tsy ho voakosoka ao an-doha Ireo fihetsikao,ireo toetranao mambabo fo Raha izay fiarahantsika ttsy Tsy hanadinoako sanatria Na tsy ho tanteraka aza ireo faniriana Ny fisianao dia ampy hifaliana Na dia tsy ho ahy mihintsy aza ianao Dia mbola tiako ho fantatrao Misy fitia ao anatiko ao Natokako mangina ho anao.
Avelao ho any koa ny lasantsika tsy hifoha, Na zay anio na ny ampisto aoka tsy hisy fxscination re Dieny mbola tsy miroborobo fakany fascinatioh fitia, dia aleo fascinnation sao mamohy Tsy ninia ny amitaka aho sanatria, na koa tsy ampy ahy ilay kaloko Cascination nisy fitia iray tsy mbola itako nandalo teo dia tsy fantatro fa lasany aho Ity no masaka tohgako aloha.
Dia avelao ho ahy irery ny fitiavako fa sao dia lo ka tsy ahay hitia intsony aho avy eo.
Free download Tsy Ho Ahy Anthony mp3, 5. Posted on janvier 8, by admin In All.
Hianatra ny hitia anao! Poopy — Ny tiako rehetra. No registration is needed. Antoko Mpihira Analamahitsy A.
Dia izao indray no tadidio fa nanome ny tsara indrindra aho Nefa ilaina ny hatsiaka na dia mamirifiry Mbola harora anie ny faikany na mamy ary ny fary Dia izao no tsarovy vascination, nafoiny.
Roméo Elvis — Angèle. Veloma indray aloha ny anio fa tsy ho ahy ianao Veloma ehveloma ah ah.